(Waxaa laga soo toosiyay Mohammed ali Clay,)
Maxamed Cali kalaay () (1942-2016) waa feeryahan caan ah oo u dhashay dalka maraykan. Maxamed Cali ayaa taariiikhdu markay aheyd 17.January 1942 ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo ku yaal Koonfurta Mareykanka. Kalaay oo ka dhashay qoys heysta Diinta Masiixiga(Baptism) ayaa waxay waalidkiisu ugu wan qaleen magaca Cassius Marcellus Clay jr. Maxamed Cali waxa uu ku guulaystay Tartanka Feerka Miisaanka Culus tiro ka sadex jeer ah. Sidoo kale waxuu muddada 20-ka sanno ah ee uu ku dhex jiray Cayaaraha Feerka ku guuleystay inuu noqdo Horyaalka Aduunka sanadaha 1964, 1974 iyo 1978. Sanadkii 1999 ayaa Kalaay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee Caalamka soo mara Qarniga 20aad.